Top 5 dòng nước hoa YSL nam, nữ mùi nào thơm nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 dòng nước hoa YSL nam, nữ mùi nào thơm nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Amakha ayisihluthulelo sokukusiza ukuthi uqiniseke ngokwengeziwe ngomzimba wakho. Ngaphandle kwalokho, i-YSL perfume line ingelinye lamakha athandwa futhi afunwa abantu abaningi. Ngakho-ke ake sithole mayelana ne-top 5. YSL . perfume Iyiphi iphunga elimnandi kakhulu kwabesilisa nabesifazane namuhla, ngaphansi kwalesi sihloko.
1 Mayelana nomkhiqizo we-YSL
2 Indlela yokukhetha i-YSL perfume efanele
3 Amakha aphezulu angu-5 e-YSL, okuyiphunga elihlala isikhathi eside
3.1 1. I-YSL Libre Eau de Parfum iwubukhazikhazi futhi ingowesifazane
3.2 2. YSL Mon Paris Eau de Toilette Perfume Yabesifazane
3.3 3. I-YSL Black Opium Eau De Toilette iwubukhazikhazi futhi iyayenga
3.4 4. YSL L’homme Iphunga elimnandi lamadoda
3.5 5. I-YSL Black Opium Eau De Toilette Perfume Yamadoda
Mayelana nomkhiqizo we-YSL
I-YSL manje cishe ayixakile kakhulu emakethe, ngaphezu kokuba imfashini ethandwa kakhulu, lolu hlobo ludume kakhulu ngemigqa yalo yezimonyo. Lo mkhiqizo wasungulwa ngo-1961 eFrance ngabaklami ababili okuthiwa uYves Saint Laurent noPierre Bergé.
Ngakolunye uhlangothi, umkhiqizo wokuqala wamakha we-YSL wethulwa ngo-1964 futhi unegama elifushane kakhulu, u-Y. Ngemva kwalokho, umkhiqizo waba nesiqalo esiphumelelayo futhi waba nempumelelo ethile. Ngaphandle kwalokho, i-YSL iyaqhubeka nokwethula imikhiqizo eminingi eyahlukene, kuze kube manje, i-YSL inemigqa yamakha ecishe ibe ngama-200, esiza ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende amaningi. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo wamakha nawo waziswa kakhulu ngomklamo wawo womkhiqizo oyingqayizivele futhi ohlaba umxhwele.
Indlela yokukhetha i-YSL perfume efanele
Ukuzikhethela i-perfume efanelekile kubaluleke kakhulu, ngoba ikusiza ukuthi uqiniseke futhi uthandeke nakakhulu.Nokho, akubona sonke esikwaziyo ukukhetha i-perfume yomzimba. Nazi izindlela zokukusiza ukuthi uzikhethele ibhodlela YSL . perfume ofaneleka kakhulu, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
Kufanele unqume ingxenye yamakha ongayithenga, i-YSL inamasegimenti amaningi omkhiqizo ahlukene ukusiza ukuhlangabezana nawo wonke amakilasi ahlukene amakhasimende.
Ngaphezu kwalokho, uzokhetha amakha ngokwezinga lokugcinwa kwephunga, umkhiqizo ngamunye wamakha ohlukene uzoba namazinga ahlukene okugcina iphunga, uyobe usekelwe ezidingweni zakho ukuze ukwazi ukukhetha ukugcinwa kwephunga okufanele kakhulu.
Ungathembela esitayeleni sakho ukuze ukwazi ukukhetha iphunga lesifazane noma ubuntu, …
Futhi ukuze ukwazi ukukhetha umugqa YSL . perfume Uma kufaneleka, kufanele unake ukwakheka komkhiqizo, lokhu kuzokusiza ugweme izithako ezibangela ukungezwani komzimba esikhumbeni sakho.
Ikakhulukazi lapho ukhetha i-perfume, akufanele ungabaze ukubuza umdayisi. Ngolwazi lwabo kuzokusiza ukuthi ubambe ulwazi olugcwele lomkhiqizo futhi kwenze kube lula kuwe ukuthi ukhethe.
Kufanele futhi ukhethe ukuthenga amakha e-YSL emakhelini ahloniphekile, ukuze uqinisekise ikhwalithi yemikhiqizo lapho uyisebenzisa.
Imikhiqizo Ethengiswayo 50% I-Charme Scandal De Paris France IPerfume Yabesifazane 100ml, Charme I-XBeauty XPo3 Imfihlo Emnyama Yamadoda Namakha Abesifazane 30ml igxilise iphunga elimnandi amahora angu-6-12. Iziqholo zesiFulentshi ezigxilisiwe, i-XBEAUTY UJean Paul Gaultier So Scandal Kwabesifazane Eau de Parfum EPD 30ml, uJean Paul Gaultier Iphunga langempela le-Jile Guilty langempela eliphezulu lamadoda angu-50ml elinamakha aqinile, angamadoda, amahle, ahloniphekile., JILE I-Gucci iqhakaza i-Nettare Di Fiori Eau De Parfum enamandla engu-100ml, i-Gucci I-Jile Good Girl perfume yangempela yabesifazane engu-50ml enephunga elimnandi, elowesifazane, i-JILE I-VERSACE EROS POUR FEMME 3 Layers Perfume 5ml ITALY, Versace
Amakha aphezulu angu-5 e-YSL, okuyiphunga elihlala isikhathi eside
Ukuze ukwazi ukuhlangabezana nezidingo eziningi zamakhasimende kanye nokusiza amakhasimende ukuba abe nokukhetha okwengeziwe nolwazi olusha, i-YSL yethule imikhiqizo eminingi ehlukene yamakha. Nansi imikhiqizo YSL . perfume akhethwa abantu abaningi, ikakhulukazi ngale ndlela elandelayo:
1. I-YSL Libre Eau de Parfum iwubukhazikhazi futhi ingowesifazane
I-YSL Mahhala Eau de Parfum Njengomkhiqizo owethulwe ngo-2019, kungashiwo ukuthi lo mkhiqizo uyinhlanganisela ephelele yabenzi bamakha ababili, u-Anne Flipo noCarlos Benaim. Lo mkhiqizo uklanywe ngabakwa-Libre ohlaba umxhwele kakhulu, onamandla futhi ohlukile, oyinkimbinkimbi futhi owubukhazikhazi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uheha amakhasimende amaningi ngenxa yephunga lawo elimnandi.
Ngakolunye uhlangothi, lo mkhiqizo uphathwa ngephunga le-Mandarin Orange, i-blackcurrant ne-orange leaf ebalulekile yamafutha. Isithako esiyinhloko somkhiqizo iphunga le-Lavender, basebenzela ukwengeza ukuthinta okuthambile ekunambithekeni okusha kwe-citrus. Ngalo mugqa wamakha unenothi eliphakathi lembali ye-jasmine ukusiza ukudala ubuhle obuthambile.
Ngaphandle kwalokho, njengomkhiqizo wesitayela saseMpumalanga, i-YSL Libre Eau de Parfum yamakha inesisekelo se-musk ne-vanilla kanye nomsedari. Banikeza ukunambitheka okuthakazelisayo, okufudumele kanye nokuhlala nokuhlala amahora amaningi.
Izindleko zomkhiqizo: 2.9 million VND.
2. YSL Mon Paris Eau de Toilette Perfume Yabesifazane
Lo mkhiqizo uyinhlanganisela emnandi kakhulu yezinongo, uthando nemizwelo. YSL .Amakha I-Mon Paris Eau de Toilette Iphethe idizayini entsha onomklamo okhangayo futhi owubukhazikhazi. Okugqamile kwalo mkhiqizo ukuthi ukukhanya nokunomoya okuzungeza kanjani umzimba wakho.
Ngalo mugqa wamakha uzokusiza uzizwe sengathi ucwiliswe ezweni lezithelo ezinoju futhi ezipholile ezinephunga leBergamot, Raspberry, Pink Pepper kanye ne-Black Raspberry. Bese kuba nephunga lehlathi le-peony eliqhakazayo elihlanganiswe nembali yawolintshi kanye nephunga le-Sambac jasmine. Ekugcineni, umuzwa omnandi nofudumele usakazeka ngobumnene esikhumbeni esingenalutho ngephunga le-patchouli ne-musk.
Ngakolunye uhlangothi, akugcini nje ngokuba nesitayela esimnene, sesifazane nesithandekayo, lo mugqa wamakha nawo usiza ukuthi ugcine iphunga amahora amaningi. Ngeqembu elinezithelo zaseCyprus nakanjani kuzokusiza ube nokuzethemba okukhulu.
Izindleko zomkhiqizo: 2.5 million VND.
3. I-YSL Black Opium Eau De Toilette iwubukhazikhazi futhi iyayenga
Yethulwe emakethe ngo-2018, i-YSL Black Opium Eau De Toilette imaka ingqopha-mlando engalindelekile futhi enamandla yolayini wephunga elimnandi we-Yves Saint Laurent. Ngenxa yokuphakama kwawo, lo mkhiqizo udonse ukunakwa okuningi kumakhasimende. Ngaphezu kokuba nomklamo omusha futhi omuhle kakhulu, lo mkhiqizo ubuye uhlatshwe umxhwele umlingo, ukunethezeka nokuthakazelisa kwephunga.
Lo mkhiqizo useqenjini le-vanilla lasempumalanga futhi unamandla okuhlala amahora afika kwangu-10. Ngomugqa YSL Black Opium Eau De Toilette perfume Uzocwiliswa kwinhlanganisela ephelele yezithelo, ehlanganiswe nephunga elimnandi lekhofi, lona umehluko walo mugqa wamakha we-YSL. Khona-ke uzobona ukucwayiza okucwayizayo kukalamula, i-bergamot nepheya eligcwele ubumnandi nobusha.
Iphunga lesibili lomkhiqizo ingoma yothando yothando ye-orange blossom ne-Sambac jasmine ekwenza ucwiliswe enjabulweni. Ukweqiwa kokugcina kwalo mugqa wamakha ukubekwa kwe-musk, imisedari ne-vanilla. Ngalo mugqa wamakha uzoba bukhazikhazi futhi ube nokunethezeka ukwedlula isixuku futhi ungawusebenzisa ezimeni eziningi ezahlukene.
Izindleko zomkhiqizo: 3.1 million VND.
4. YSL L’homme Iphunga elimnandi lamadoda
Lona ngumkhiqizo owasungulwa ngo-2013 futhi ungumkhiqizo wamadoda. Okuningi I-YSL L’homme I-perfume enamandla ingeyeqembu lamakha asempumalanga futhi inomklamo ohlaba umxhwele futhi onamandla, ontekenteke ngayo yonke imininingwane. Lo mkhiqizo wenze umbono onamandla kakhulu kumakhasimende amaningi ngamakha awo aphelele.
Lo mugqa wamakha uyinhlanganisela yamanothi e-citrus, izinongo, izinkuni nezimbali. Iphunga liqala ngongqimba oluqinile lokuvula ulamula, i-bergamot kanye nopelepele okuholela iphunga kumanothi aphakathi. Amanothi aphakathi acebile ngamakha e-orange blossom, umhlonyane waseNdiya namaqabunga e-violet. Amanothi aphakathi athotshisiwe kumanothi ayisisekelo ahlanganisa amanothi enkuni anothando futhi aqine kakhulu kanye ne-ambergris.
Amanothi anokhuni abe nomthelela ekwenzeni iphunga lifudumale. Ngalo mugqa wamakha awusizi nje kuphela ukugcina iphunga emzimbeni amahora amaningi kodwa futhi kusiza amadoda ukuba abe nokuzethemba nokunethezeka.
Izindleko zomkhiqizo: 2.3 million VND.
5. I-YSL Black Opium Eau De Toilette Perfume Yamadoda
Lo mugqa wamakha wethulwa ngo-2018 ngemuva kwempumelelo yenguqulo ye-Y Eau de Toilette. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unomklamo oqinile futhi okhangayo. Isigqoko sebhodlela se YSL Black Opium Eau De Toilette perfume Okumnyama kunobukhazikhazi kanye nokungaqondakali, kusiza ukudala ubuhle bezinga nobuhle obuhlukile. Kungashiwo ukuthi lokhu kuwumkhiqizo ogcwele ubudoda namandla endoda.
Lo mugqa wamakha uphethe iphunga elithambile nelisha le-Bergamot, Ujinja kanye ne-Apula Eliluhlaza esitezi sokuqala. Khona-ke uzocwiliswa umuzwa oxubile weSage, Juniper neGeranium. Ungqimba lokugcina lomkhiqizo luphethe iphunga lokhuni lomsedari elihlanganiswe nobhontshisi ojulile weTonka. Lo mkhiqizo uzokusiza ukuthi ulondoloze iphunga amahora amaningi ukuze usize wenze umbono oqinile kumuntu ophambene.
Izindleko zomkhiqizo: 2.6 million VND.
I-YSL perfume iwumugqa wamakha okunikeza imizwa eminingi ehlukene kanye nolwazi olunamaphunga amaningi. Ngenhlanganisela ephelele yamaphunga YSL . perfume Kuzokusiza ukuthi uzethembe kakhulu ngomzimba wakho. Ngethemba, lokhu kukusize ukuthi uthole ulwazi olusha oluningi futhi kwenze kube lula kuwe ukuthi ukhethe amakha afanele izidingo zakho nesitayela.
Xem Thêm Top 9 dầu ăn dặm bán chạy nhất 2022 | Muasalebang
Mầm đậu nành là gì? Có tác dụng gì và cách làm bột đậu nành | Muasalebang